Horudhac: Athletic Bilbao vs Barcelona… (Kooxaha ugu hanashada badan taariikhda Copa del Rey oo caawa ku kulamaya final-ka tartankan) – Gool FM
Horudhac: Athletic Bilbao vs Barcelona… (Kooxaha ugu hanashada badan taariikhda Copa del Rey oo caawa ku kulamaya final-ka tartankan)
(Seville) 17 Abriil 2021. Labada kooxood ee ugu guulaha badan taariikhda Copa del Rey ayaa ku kulmi doona final-ka tartankan 2021, iyadoo kooxaha Athletic Bilbao iyo Barcelona ayaa isku qaban doona kulan ka dhacaya caawa Magaalada Seville.
Athletic, kuwaasoo khasaaro kala kulmay Final-kii tartankan ee 2020 kooxda Real Sociedad horraantii bsihaan ayaa ku guuleysatay tartankan 23 jeer oo hore, halka Barcelona ay tahay kooxda ugu badan ee hanatay koobkan taariikhda, waxaana ay ku guuleystay 30 jeer.
Tartanka: Spain – Copa del Rey Final
Garoonka: Estadio de La Cartuja
Yuri iyo Yeray ayaa ku soo laabtay tababarka kooxda Athletic Club todobaadkan, waxaana ay ka qeyb qaadan karaan afarta daafac ee dambe kulankan.
Unai Vencedor iyo Dani Garcia ayaa la filayaa inay noqon doonaa dooqa koowaad ee Macallin Marcelino oo ay ka soo muuqan doonaan khadka dhexe ee kulankan.
Alex Berenguer iyo Oscar de Marcos ayaa kala dambeyn doona iyagoo kala ciyaari doona garabka weerarka iyo kan difaaca.
Gerard Pique ayaa dhowaan taam noqday, waxaana la filayaa inuu ku soo bilaaban doono daafaca dhexe ee kulankan kama dambeysta ah.
Ronald Koeman ayaa la filayaa inuu u guuro shaxda 4-3-3, iyadoo Frenkie De Jong uu ka soo muuqan doono khadka dhexe.
Ousmane Dembele iyo Antoine Griezmann ayaa ka mid noqon kara saddexda weeraryahan ee hore ee kooxda Blaugrana kaddib markii ay qaab ciyaareed cajiib ah soo bandhigeen dhowaan.
>- Barcelona ayaa siddeed jeer horay ugu wajahday kooxda Athletic Bilbao final-ka Copa Del Rey, waxaana ay guuleysteen lix ka mid ah kulammadaas, halka ay guuldarro la kulmeen labada kale.
>- Athletic Bilbao ayaa ku guuldarreysatay inay guul gaarto mid kasta oo ka mid ah shanteedii kulan ee ugu dambeeyey, waxaana ay barbaro gashay afar ka mid ah kulammadaas, halka kulanka kale laga adkaaday.
>- Barcelona ayaa kaliya hal jeer guuldarro la kulantay 10-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay tartammada oo dhan, waxa ay guuleysatay todobo ka mid ah kulamadaas, waxaana ay barbaro galeen labo barbaro.
>- Ronald Koeman ayaa tagay 10 final tagay intii uu ku jiray xirfaddiisa tababarennimo, waxaana uu qaaday shan ka mid ah kulammadaas, halka shanta kale laga qaaday oo uu guuldarreystay.
>- Lionel Messi ayaa Barcelona u ciyaaray 33 final oo kala duwan, waxaana uu ka dhaliyey kulammadaas 29 gool, Copa Del Rey saddex final ayuu ka hortagay Athletic Bilbao, waxaana uu ka dhaliyey afar gool isagoo mid kalena ku dhiibay, dhinaca kale Messi ayaa Bilbao ka hortagay 40 kulan dhammaan tartammada, waxaana uu ka dhaliyey 26 gool isagoo 7 caawin ku sameeyey.
Horudhac: Chelsea vs Manchester City... (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ee afar dhammaadka FA Cup-ka)